Bhuku raZvakazarurwa 4:1-11
4 Pashure peizvi ndakaona suo rakanga rakavhurika kudenga, uye inzwi rekutanga randakanzwa richitaura neni raiita sebhosvo, uye raiti: “Kwidza kuno uye ndichakuratidza zvinhu zvinofanira kuitika.” 2 Pashure peizvi mweya wakabva wauya pandiri, uye paiva nechigaro cheumambo chaiva panzvimbo yacho kudenga, chiine akanga akachigara.+ 3 Uya akanga agere ipapo aipenya sedombo rejaspa+ nedombo resadhiyo,* uye chigaro chacho cheumambo chakanga chakakomberedzwa nemuraraungu wakaita sedombo reemaradhi.+ 4 Chigaro chacho chakanga chakakomberedzwa nezvigaro zveumambo 24, uye ndakaona vakuru 24+ vakanga vakagara pazvigaro zvacho vakapfeka nguo chena nekorona dzegoridhe mumisoro yavo. 5 Pachigaro chacho cheumambo paibuda mheni+ nemanzwi nekutinhira;+ uye paiva nemwenje minomwe yaibvira pamberi pechigaro cheumambo, uye mwenje yacho inomiririra mweya minomwe yaMwari.+ 6 Pamberi pechigaro chacho cheumambo paiva nerinenge gungwa rakaita segirazi,+ rakafanana nekristaro. Nechepakati pechigaro chacho* uye kumativi acho ese, paiva nezvisikwa zvipenyu zvina+ zvainge zvizere maziso mberi neshure. 7 Chisikwa chipenyu chekutanga chakanga chakaita seshumba,+ chechipiri chakanga chakaita semukono wemombe,+ chechitatu+ chakanga chiine chiso chakaita sechemunhu, uye chechina+ chakanga chakaita segondo riri kubhururuka.+ 8 Kana zviri zvisikwa zvipenyu zvina, chimwe nechimwe chazvo chaiva nemapapiro 6; akanga akazara maziso kumativi ese uye nechepasi pawo.+ Siku nesikati zvinoramba zvichiti: “Mutsvene, mutsvene, mutsvene, Jehovha*+ Mwari Wemasimbaose, uyo akanga aripo uye aripo uye achauya.”+ 9 Pese panopa zvisikwa zvipenyu rukudzo neruremekedzo nekuonga kuna iye agere pachigaro cheumambo, anorarama nekusingaperi,+ 10 vakuru 24+ vanobva vawira pasi pamberi peuya akagara pachigaro cheumambo vonamata iye anorarama nekusingaperi, uye vanokanda korona dzavo pamberi pechigaro cheumambo, vachiti: 11 “Jehovha,* Mwari wedu, makakodzera kuti mugamuchire kukudzwa+ nekuremekedzwa+ nesimba,+ nekuti makasika zvinhu zvese,+ uye nekuda kwenyu zvakavapo uye zvakasikwa.”
^ Kana kuti “nedombo dzvuku rinokosha.”
^ Kana kuti “Nechepakati, apo paivawo nechigaro chacho cheumambo.”